Israa'iil oo duqeyn ku dishay sarkaal falastiinti ah & Boqolaal Madaafiic ah oo loogu jawaabay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Israa'iil oo duqeyn ku dishay sarkaal falastiinti ah & Boqolaal Madaafiic ah oo loogu jawaabay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada Israel ayaa duqeyn ay ka fuliyeen Marinka Gaza ee dhulka Falastiin ku dilay sarkaal sare oo taliye ka ahaa kooxda Islamic Jihad ee Muqaawamada reer Falastiin.
Dilka khaarijinta ah ayaa waxa amray Ra’iisul wasaaraha xilka sii haya ee Yuhuudda Benjamin Netanyahu, waxaana weerarka lagu dilay Bahaa Abul-Cadhaa oo ahaa sarkaal weerarro badan ku qaaday Isra’iil, isagoo madax ka ahaa qeyb muhiim ah oo ka tirsan ururka islamic Jihaad, waxaa kaloo duqeynta Israa’iil lagu dilay xaaska sarkaalka, iyadoo ay dhawacmeen caruur uu dhalay.
Kooxda Islamic Jigaad ayaa shaacisay inay u aargudi doonto dilka hoggamiyaha sare ee kooxdaasi, waxaa kaloo falkan cambaareeyay ururka Xamaas oo kale ballan-qaaday in Israel ay dhabarka u ridan doonto wuxuu cawaaqib xumo ah iyo natiijada ka dhalata weerarka.
Waxaa gantaallo fara badan lagu riray degaanada Yuhuudda, waxayna wararkii ugu danbeeyay sheegayaan in ilaa 150 Gantaal in ka badan ay kooxaha Falastiiniyiinta ku tuureen magaalooyin iyo degaano u dhow Marinka Gaza. Dhowr qof oo Yuhuud ah ayaa la sheegay inay dhaawacmeen, waxaana la xiray degaano dhowr ah.
Previous articleWasaaradda Warfaafinta oo Shaqadii ka joojisay Hay’ado Warbaahineed oo dalka ka howlgala
Next articleMadaxweyne Farmaajo: “Madaxweyne Musaveni waa saaxiib weyn oo Somaliya leedahay…”